Galaxy Fold: Ejiri vidiyo rụọ ọrụ ya | Androidsis
Leaked a ọhụrụ video ebe ị na-ahụ ọrụ nke Galaxy n'ogige atụrụ
Galaxy Fold bụ ekwentị kacha atụ anya na 2019 a. Na ihu ọma, enwere ntakịrị ihe maka mwepụta ya. Ebe ọ bụ na Samsung dị elu ga-eme mbata ya n'ahịa Europe na Mee. Akpọrọ ekwentị ka ọ bụrụ ntụnyere na ngalaba a. Agbanyeghị na ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ ebughị n'obi ịhapụ ngwaọrụ ahụ ka ọ rụọ ọrụ gbalịa n'ụlọ ahịa.
Ya mere, nzacha vidiyo na -egosi ọrụ nke Galaxy Fold a bụ ihe na -amasị ndị ọrụ. Nke a bụ ihe mere n'okwu a. Ederede vidiyo ọhụrụ, nke anyị nwere ike ịhụ ka ekwentị Samsung a si arụ ọrụ. Ọ dị ka enwere ike iji otu aka rụọ ya nke ọma.
Na mgbakwunye, vidiyo a na -enye anyị ohere inwe mmetụta na ojiji enwere ike ịme enyo ekwentị. Ebe ọ bụ na Galaxy Fold ahọrọla ihuenyo abụọ, nke nwere ibelata na mpụga, nke doro anya bụ otu n'ime ọtụtụ ohere ekwentị ga -enye ndị ọrụ.
Na mgbakwunye, ọ na -enyekwa aka ịhụ nke ahụ ọ ga -ekwe omume igbasa ekwentị site na iji otu aka. Ihe nke ga -enye ohere ka ọ dị mfe iji oge niile maka onye na -azụ ahịa. Ebe ọ bụ na ọ dị mkpa inwe ike iji smartphone jiri naanị otu aka, ihe na -eme n'ọtụtụ oge.
Ị nwekwara ike ịhụ ihu na Galaxy Fold a, nke na -enye mmetụta nke ọmụmụ mmiri na usoro ọrụ. Yabụ na ọ dị ka iji ekwentị agaghị enwe nsogbu ọ bụla. Kedu ihe ọzọ, Samsung ekwuola na ngosipụta ya na ọ bụ ngwaọrụ gbadoro ụkwụ n'inwe ike rụọ ọtụtụ ọrụ.
Kechioma enwere obere ihe maka Galaxy Fold a ga -ebido n'ihu ọha n'ụlọ ahịa. Site na mbido Mee, ọ ga -abanye na ahịa dị iche iche na Europe. Yabụ na anyị ga -enwe nkọwa akọwapụtara nke ọma banyere mmalite ya na Spain n'izu ndị a. Kedụ ihe ị chere maka ekwentị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Leaked a ọhụrụ video ebe ị na-ahụ ọrụ nke Galaxy n'ogige atụrụ
Fortnite enyela anyị ohere iji tụte ndị enyi ewepụrụ
Etu ibudata Download Cheetah Traceless QuickPic Mod APK